I-Chic Oceanfront Cottage- The Fish Sheds (Tom 's) - I-Airbnb
I-Chic Oceanfront Cottage- The Fish Sheds (Tom 's)
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguChristopher
Siyakwamkela kwiindlwana zethu ezintle, eziphambi kolwandle zolwandle kweyona ndawo imangalisayo kwiGros Morne National Park. IiFish Sheds zikufuphi nazo zonke iindawo zokutyela zasekhaya, iivenkile kunye neendawo zokuzonwabisa ukuze ube lula. Yonwabela umbono omangalisayo wolwandle, iBonne Bay, kunye neLobster Head Lighthouse, ngqo kwifestile yakho. Yonwabele le ndawo intle kwaye ujonge ukutshona kwelanga edolophini!
Amaxabiso ethu abandakanya zonke iirhafu zephondo kunye nezomanyano
Iindlwana ezihlanu ezenziwe kakuhle zibekwe ecaleni kolwandle. Imizuzu nje ukusuka edolophini, le ndawo ingasese yindawo yokubuyela umva njengenye. Izindlu zangasese zibonelela ngobudlelwane obusondeleyo, obulula kunye nokuphumla kubantu aba-2, kunye nenketho yeendwendwe ezi-2 ezongezelelweyo ngesicelo.
Ii-cottages zenzelwe ukuba zipholile kwaye zibe noxolo. Besifuna ukwenza umoya oza kukuvumela ukuba uphumle kwaye uphumle xa uhlala eGros Morne. IiShedi zeentlanzi ziindlwana zegumbi elinye kodwa kukho indawo eyaneleyo kunye nogcino olubonelelweyo. Igumbi lokuhlala lenzelwe ukukuvumela ukuba uthathe i-vista entle ngelixa ufunda incwadi okanye umamele umculo othile. Iikhitshi zethu zineendawo ezininzi zokulungiselela kwaye ziyakwanelisa uninzi lweemfuno zokupheka zabahambi. Amagumbi okuhlambela abanzi kwaye aneshawa emileyo.
I-cottage nganye inomgangatho wabucala ukuze uyonwabele kwaye kukho i-BBQ kwisiza onokuthi uyisebenzise ukuba ufuna ukuphosa kwi-steak ukuze uhambe neglasi yesibini yevino.
Omnye umhambi wayichaza indawo esikuyo “njengesiphelo sehlabathi”. Siyithanda kakhulu loo nkcazo. Sifumaneka kwi-10 Bayview Road kwaye indawo yethu iphezulu kwaye ikude noluntu kodwa kwimizuzu nje yokuhamba ukusuka kweyona venkile inkulu edolophini, enye yezona ndawo zokutyela zinconywa kakhulu kunye nemarike yeentlanzi yasekhaya. Sihamba ngaphantsi kwemizuzu emihlanu ukuya kumbindi weRocky Harbour okanye uhambo olunemingxuma eli-15. Ngqo ngasemva kwethu mhlawumbi yenye yeendlela zethu esizithandayo ezincinci ezaziwayo epakini, iSalmon Point lookout. Zonke iindlela eziphambili ezibandakanya iGros Morne Mountain zikude ngemizuzu nje. Ukuba awusikholelwa, jonga kwindawo yakho, ilapha! ha Siyabuthanda ubumelwane bethu kwaye sinethemba lokuba nawe uya kuthanda.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye siya kukushiya ukonwabele ukutshona kwelanga okumangalisayo. Nangona kunjalo, sihlala sikwipropathi sisebenza ngokujonga umhlaba kunye nokuphucula amava akho. Siyakuthanda ukuthetha nabantu ngoko ukuba sikufutshane sicela ungabi nazintloni zokuvusa incoko okanye ukusibuza umbuzo. Ukuba siphumile kwipropathi, siyafowuna kuphela ukuba ufuna nantoni na.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye siya kukushiya ukonwabele ukutshona kwelanga okumangalisayo. Nangona kunjalo, sihlala sikwipropathi sisebenza ngokujonga umhlaba kunye nokuphuc…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rocky Harbour